आन्दोलन/संघर्ष – Page 79 – JanaSanchar.com
अन्तत: डा. केसीले अनशन तोडे, १० वर्षसम्म उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने
सरकारसँग सहमतिपछि डा. गोविन्द केसीको २७ दिनदेखिको अनशन तोडिएको छ । बिहीबारको करिब ९ घण्टाको वार्ता सहमतिमा पुगेपछि डा. केसीलाई नेकपा नेता सुवास नेम्वाङ र प्रा.केदारभक्त माथेमाले स‌ंयुक्त रुपमा जुस खुवाएर अनशन ताेडाएका हुन् । जुस खुवाउँदै नेम्वाङले अब यस्ताे अनसन कसैले बस्न नपराेस भने । १० वर्षसम्म उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज..
रसुवाको टिमुरेमा गएको पहिरोमा पुरिएर तीन जनाको मृत्यु,, १० जना बेपत्ता
गएरातिको भिषण वर्षापछि रसुवाको टिमुरेमा गएको पहिरोमा पुरिएर तीन जनाको मृत्यु भएको छ l अझै १० जना बेपत्ता छन् ।१२ घाइतेलाई उपचारको लागि टिमुरे स्वास्थ्य चौकीमा ल्याइएको छ । पहिरोले टिमुरेमा रहेको अस्थायी प्रहरी पोष्ट बगाएको छ । उद्दारका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेलसहितको टोली घट्नास्थलमा पुगेको छ । पानी अझै परिरहेकाले..
महासचिब विप्लब र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय नेताहारु गिरफ्तार हुनबाट बाल बाल बचेका छन् l प्युठान र अर्घाखाँचीको सीमामा पर्ने घना जंगलमा नेकपाको बैठक चलिरहेका बेला प्युठान सदरमुकामबाट गएको ठुलो संख्याको प्रहरी टोली कार्यक्रमस्थल पुग्नु अगावै नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले कार्यक्रमस्थल छाडीसकेकाले उनीहरु गिरफ्तार..
सरकार र डा. केसीको वार्ता टोलीबीच सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्ता असफल भएको छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. केसी पक्षले राखेको संशोधनका प्रस्तावमा सरकारी पक्षले कुनै ठोस जवाफ नदिएपछि वार्ता असफल भएको हो । सरकार जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत नभएको भन्दै डा. केसीको वार्ता टोलीले अब आफूहरुले दिएको सूचीका आधारमा सुधारसहित..
भारतको बनारसमा नेपाली महिला बन्धक बनाउने ५ जना भारतीय पक्राउ परेका छन् । बनारसका एसएसपी आनन्द कुलकर्णीको नेतृत्वमा गएको सुरक्षा बलले बनारसस्थित नटकनिया दाइका जयसिंहको घरमा छापा मार्ने क्रममा दुई महिला र तीन पुरुष सहित पॉच जनालाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले छापा मार्ने सूचना पाएपछि जयसिंहको घरमा राखिएका नेपाली महिलालाई भने दलालले..